आखिर यो मन त नेपाली नै हो ! | We Nepali
आखिर यो मन त नेपाली नै हो !
वीनेपाली | २०७३ जेठ १७ गते २१:०४
यो लेखको शीर्षक के राखूँ भन्ने बारेमा मेरो मनमा धेरै कुराहरु आए। ‘कर्मभूमि, नेपाली मन’ वा ‘परदेशमा नेपाली मन’ वा ‘विदेशतिर बरालिएको नेपाली मन’। आखिर शीर्षक जे राखे पनि यो लेखमा मैले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नेपालतिर आकर्षित हुने मनको बारेमा चर्चा गर्न खोजेको हुँ। कसैको लागि यो विदेशी भूमि कर्मभूमि होला, कसैको लागि ज्ञान भूमि होला, त कसैको लागि अरु कुनै। जे होस् हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरुमा जहाँ बसे पनि, जे गरेपनि, नेपालको माया, नेपाल प्रतिको लगाव र नेपालप्रतिको चिन्ता असिम हुन्छ। त्यसैले आखिर यो मन त नेपाली नै हो।
कसै कसैले भन्छन, विदेशमा बस्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ नेपाल छोडदाको पिडा र नेपालप्रतिको असिम माया। कोही दाबी गर्छन्, नेपालमा बस्ने भन्दा विदेशमा बस्ने नेपालीहरु नेपाललाई बढी माया गर्छन्। कसैलाई यो कुरा मिथ्या लाग्न पनि सक्छ। माया नाप्ने न त कुनै मेसिन छ, न त कुनै बैज्ञानिक तरिका। यो त मनले महशुस गर्ने र भावले बुझ्ने कुरा हो। माया यस्तो कुरा हो, जस्को बारेमा सबैभन्दा बढी कुरा र चर्चा गरिन्छ। चाहे सुखको रुपमा होस् वा दुखको रुपमा, हामी सबै मायाको महशुस गर्छौ। यो सर्बब्यापी छ, यो एउटा यस्तो अदृश्य, अदभुत र अनुपम शक्ति हो, जसले यो संसारलाई एउतै सुत्रमा बाँधेर राखेको छ।
यो त भयो मायाको कुरा। अब गरूँ विदेशमा बस्ने नेपालीले नेपालप्रति गर्ने मायाको कुरा र कसरी विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले नेपालप्रति आफ्नो कर्तब्य पूरा गर्छन्।
विदेशमा बस्ने हरेक नेपालीहरुको परिवार, आफन्त र साथीभाईहरु त नेपालमा नै छन् । नेपाल र नेपालीलाई कुनै दु:ख हुँदा विदेशी भूमिमा बस्ने नेपालीहरुको मन नदु:ख्ने कुनै कुरै भएन। अनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरु कुनै न कुनै सामाजिक काम गर्न तत्पर हुन्छन, जस्ले नेपालमा बस्ने आफन्तजनलाई सहयोग पुगोस्। चाहे नेपालमा भूकम्प आएको बेला होस् वा नाकाबन्दीको पिडामा होस्, विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले नेपालप्रति देखाएको माया, सद्भाव र सहयोग नेपालमा बस्ने नेपालीको भन्दा कुनै कमी थिएन र छैन। यो त भयो कर्तव्यपालन र जिम्मेवारीको कुरा। सबैले आ-आफ्नो परम्परा र चलन अनुसार कर्तब्यपालन गरेको तर्क पनि गर्न सकिन्छ। तर त्यसो भन्दैमा, यो सकारात्मक पक्षलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नेपालप्रतिको लगावको दोश्रो पक्ष सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पक्ष हो। विदेशमा बस्ने नेपालीहरु माझ यो पक्ष पनि निकै मजबुत छ। जुनसुकै देश, समाज र परिवेशमा बसे पनि नेपालीहरुले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परालाई जीवन्त राखेका छन्। हामी नेपाली संस्कृति र परम्परामा निकै धनी छा। मुख्य मुख्य चाँड, अनेक पर्व र चलनलाई विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले त्यत्तिकै महत्व र मनोरन्जनका साथ मनाउदै आएका छन्। यसका विकृति र विसंगतिका पक्षहरु पनि छन्। जस्तै, चाडपर्वलाई महँगो गहना र फेशन प्रदर्शनको रुपमा लिनुलाई एउटा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ, जस्को भावी प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै बिसंगतिलाई न्यूनीकरण गर्नु जरुरी छ।
अब कुरा गरूँ राजनीतिक पक्षको। विदेशी भूमिमा पनि हरेक राजनीतिक दल, गुट र उपगुटका आ-आफ्नै संगठनहरु छन्। नेपाली राजनीतिको प्रभाव विदेश भूमिमा पनि खुब पर्छ। कतिपय विदेशमा बस्ने नेपालीहरु सक्रिय रुपमा नेपाली राजनीति गर्दै आएका छन्। विदेशीमा बस्ने नेपालीहरु राजनीतिक दलको सदस्य हुनु सामान्य हो। चाहे साँच्चै राजनीति गर्नको लागि होस्, वा अरु कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि होस् । जस्तै चाहे त्यो नेपाली नेताहरुसंग सम्पर्क बढाउनको लागि होस्, वा पद, नाम वा चर्चाको लागि।
थप कुरा के भने नेपाली संविधानले विदेशमा बस्ने नेपाली मुलका नेपालीहरुलाई राजनीतिक अधिकार नदिएको भए पनि नेपाली राजनीतिक दलका अमेरिका तथा युरोपमा गठित संगठनका अधिकांश सदस्यहरु यही समूहका छन् । झन् रोचक पक्ष त के छ भने, नेपालमा हरेक जसो राजनीतिक दलहरुमा जुन किसिमको बेथिति, विसंगति, गुट, उपगुट र अस्तब्यतता छ, त्यस्तै किसिमको भद्रगोल विदेशमा गठित राजनीतिक दलका अधिकांस संगठनहरुमा पनि देख्न सकिन्छ। जसरी नेपालका राजनीतिक दलहरुमा नीति र विचारभन्दा नेता माथि हुन्छन, त्यस्तै विदेशमा बस्ने नेपालीहरुमा पनि न त नीतिको चर्चा हुन्छ, न त संगठनको मुलभूत सिद्धान्तको। विदेशमा बस्ने नेपालीहरु बिच धेरै त आफ्नै नेता, त्यही पनि आफ्नै गुटको नेताको मात्रै चर्चा हुन्छ।
त्यसो त विदेशमा बस्ने थोरै नेपालीहरु छन्, जस्लाई न त विदेशी न त नेपाली राजनीतिसंग कुनै सरोकार छ। उनीहरुलाई सरोकार छ त आफ्नै काम, कमाई र परिवारको।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई नेपालसंग जोड्ने अर्को पक्ष आर्थिक पक्ष हो। विदेशी भूमिमा बस्ने नेपालीहरु आर्थिक रुपमा नेपालसंग निकै मजबुत किसिमले जोडिएका छन्। सबैजसो विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नेपाल छोड्नुको मूल कारण आर्थिक पक्ष सबल बनाउनको लागि हो। सबैलाई थाहा भएको तथ्य हो, नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड भनेको रेमिट्यान्स हो।
कतिपय नेपाली परिवारको आर्थिक श्रोत विदेशमा बस्ने परिवारको सदस्यको कमाई हो। विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले कतिपय ठूला तथा साना परियोजनाहरुमा आर्थिक लगानी गरेका छन्। साथै, विदेशमा बसेर कमाएको पैसाले नेपालमा फर्केर लगानी गरेर सानोतिनो ब्यबसाय गर्नेहरुको पनि कमी छैन। विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको यो योगदान सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सकारात्मक पक्ष हो।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरु कति ब्यस्त हुन्छन, त्यो त यो लेखमा वर्णन गर्नु पर्ने कुरा हैन। तर पनि आफ्नो ब्यस्त जिन्दगीमा समय निकालेर कतिपय नेपालीहरु सामाजिक कार्यमा जसरी ब्यस्त हुन्छन, त्यो अनुकरणीय नै छ। चाहे उद्धेस्य जे सुकै किन नहोस – साँच्चै सामाजिक कार्य गर्नको लागि, चर्चाको लागि, सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल गर्नको लागि, नेटवर्क वा अन्य कुनै कार्यको लागि। जुनसकै उद्धेस्य भएपनि समाजको लागि केही गर्न चाहानुलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु।
माथि उल्लेख गरिएका कुराहरु त केही उदाहरणहरु मात्रै हुन्। कतिपय व्यक्तिगत र सामुहिक रुपमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले नेपाल र नेपालीप्रति गरेको उदाहरणनीय कार्यहरु छन् जस्को जति चर्चा र तारिफ गरे पनि कम हुन्छ। जे जसरी भएपनि, जुन रुपमा गरे पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नेपाल प्रतिको माया, सद्भाव र सहयोग उल्लेखनीय छ। जहाँ गए पनि, जे गरे पनि, जहाँ बसे पनि, आखिर यो मन त नेपाली नै हो।